Joany 17 - Ny Baiboly
Joany toko 17
9Mangataka ho azy ireo aho. Tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho, fa ho an'izay nomenao ahy, satria anao izy ireo 10(fa anao izay ahy rehetra, ary ahy izay anao rehetra), ary nahazo voninahitra amin'izy ireo aho. 11Tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho; izy ireo no ho eto amin'izao tontolo izao, fa izaho kosa ho any aminao. Ray masina ô, tahirizo amin'ny anaranao izay nomenao ahy, mba ho iray tahaka antsika izy. 12raha mbola teo amin'izy ireo aho, dia nitahiry azy tamin'ny anaranao. Eny, nitahiry izay nomenao ahy aho, ka tsy nisy very izy na dia iray aza, afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana, mba ho tanteraka ny Soratra Masina. 13Ankehitriny mankany aminao aho, ka manao izany fangatahana izany dieny mbola amin'izao tontolo izao, mba hananan'izy ireo ny fifaliako tanteraka ao aminy. 14Nomeko azy ny teninao, ka halan'izao tontolo izao izy ireo, satria tahaka ny tsy maha-olon'izao tontolo izao ahy no tsy maha-olon'izao tontolo izao azy koa. 15Tsy ny hanesoranao azy amin'izao tontolo izao no angatahiko, fa ny hiarovanao azy amin'ny ratsy. 16Tahaka ny tsy maha-olon'izao tontolo izao ahy no tsy maha-olon'izao tontolo izao azy ireo koa. 17Ankamasino amin'ny fahamarinana izy ireo. Ny teninao no fahamarinana. 18Tahaka ny nanirahanao ahy ho ao amin'izao tontolo izao no nanirahako azy ho ao amin'izao tontolo izao koa. 19Manamasina ny tenako ho azy ireo aho, mba hohamasinina amin'ny fahamarinana koa izy.
20Tsy ho azy ireto ihany no angatahako, fa ho an'izay hino ahy noho ny teniny koa: 21mba ho iray izy rehetra, tahaka anao, Ray, ato amiko, ary izaho ao aminao, ary mba ho iray ao amintsika koa izy, ka hinoan'ny olona fa hianao no naniraka ahy. 22Efa nomeko azy ny voninahitra nomenao ahy, mba ho iray izy tahaka ny maha-iray antsika: 23Izaho moa ao aminy, hianao kosa ato amiko, mba ho tena iray tokoa izy ireo, ka ho fantatr'izao tontolo izao fa hianao no naniraka ahy. 24Ray ô, tiako hiaraka amiko, any amin'izay itoerako, ireo nomenao ahy, mba hahita ny voninahitra nomenao ahy, satria efa tia ahy talohan'ny nahariana izao tontolo izao hianao. 25Ray marina ô, tsy nahalala anao izao tontolo izao, fa izaho no nahalala anao, ary ireto koa no nahalala fa hianao no naniraka ahy. 26Efa nampahafantariko ny anaranao izy, sady mbola hampahafantariko koa, mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao ahy, ary mba ho ao aminy koa aho. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0229 seconds